“पुराना ऐन कानुन, चन्दा आतंक र भष्ट्रचार नै अहिलेको चुनौति हो”- गृहमन्त्री | mulkhabar.com
“पुराना ऐन कानुन, चन्दा आतंक र भष्ट्रचार नै अहिलेको चुनौति हो”- गृहमन्त्री
March 25, 2018 | 4:29 pm 182 Hits
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशमा पुराना ऐन कानुन, चन्दा आतंक र भष्ट्रचार जस्ता कुरा हावी भइरहेकाले यसको नियन्त्रण गर्न चुनौती रहेको बताएका छन् । आज बिहान नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका प्रतिनिधीहरुसँगको कुराकानीमा गृहमन्त्री थापाले अहिलेको चुनौति अरबौँमा सुन तस्करी हुने गरेको खुलासा गरे ।
उनले हत्याकाण्डहरु भइरहेको र लागुऔषधको पनि अरबौँको कारोबार भइरहेको बताँउदै तिनीहरुलाई कसरी रोक्ने? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । उनले भने, ‘नेपाल तस्करहरुको यस्तो स्वर्ग बनेको छ । नेपाल अपराधीहरुको सेल्टर बनेको छ । अरु देशको आन्तरिक सुरक्षामा पनि यसले असर पु¥याइरहेको छ ।’ मन्त्री थापाले नोपलको अर्को चुनौती भष्ट्राचारलाई निर्मुल पार्नु रहेको बताए । उनले कैयन ऐनहरु पुराना असान्र्दभिक भएको र कतिपय परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए । अहिले आइरहेका चुनौती हटाँउनका लागि नेपाल चेम्बरको पनि ठुलो भुमिका हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ऐन संसोधन गर्नका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
गृहमन्त्री थापाले पुराना ऐन कानुन, चन्दा आतंक र भष्ट्रचार अहिलेको चुनौति भएको बताएका छन् । उनले यी कुरा निर्मुल नगरेसम्म ब्यापार ब्यवसाय सुरक्षित नहुने बताएका हुन् । उनले कसैले धम्की दिइरहेको र आतंक मच्चाइरहेको छ भने उनीहरुको नाम दिन आग्रह गरे । व्यवसायीहरुले सूचना दिए कठोरतापूर्वक कारबाही गर्ने उनले स्पष्ट पारे । उनले भने–‘कुनै न कुनै आवरणमा, क्रान्तिको नाममा चन्दा माग्नेहरुले देशको अर्थतन्त्र चौपट पारेका छन् । तिनीहरु पनि दलाल पुँजीपति नै हुन् । लुमप्येङ भनिन्छ, तिनीहरुलाई हाम्रो रानीतिक भाषामा । तिनीहरु डाँका चोर जस्तै हुन । लुट्ने ठग्ने खाने । त्यसकारण त्यो तत्वलाई परास्त गर्नुपर्छ ।’
उनले आर्थिक क्षेत्र मात्र नभई अरु क्षेत्रमा पनि नेपाल एउटा खतरनाक पोइन्टको रुपमा विकास भइरहेका उल्लेख गरे । यो सबैलाई ठिक पार्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको रहेको बताँउदै जनताको स्तरबाट पनि सहयोग गर्न आग्रह गरे । उनले भने–‘नेपाल भष्ट्राचार तस्करबाट मुक्त होस, त्यसपछि मात्र ब्यापार ब्यवसाय फस्टाँउछ, विकास र समृद्धी हासिल हुन्छ । यहाँ कोही पनि लगानी गर्न चाँहदैन, लगानी गर्न त सुरक्षा देख्नुपर्यो नि त ? आज बिहान एउटा अष्टेलियाबाट आएको थियो । उनले ब्यापार क्षेत्रका लागि केही ऐन संसोधन गर्न आवश्यक रहेको बताँउदै भएका ऐन कडाईका साथ लागु गर्न जरुरी रहेको बताए । र, उठेको प्रश्न, यति धेरै सूचना पाएपछि अब गृहमन्त्री थापाले कस्तो एक्सन लिन्छन् ? यो चाहिँ भविष्यमा मात्र थाहा हुनेछ ।